Alaab-qeybiyahaaga Laysarka ah ee lagu kalsoonaan karo, Xalka Laser-ka Xirfadlayaasha ah
Nidaamka Aqoonsiga Contour ee Mimo
Fududeeya Soosaarka Sublimation
>> Wax badan baadh
Mawqif sax ah
R&D ee Cordura
Qaabka Wayn ee Laser Cutter
Balac ahaan 3.2 mitir gudahood
Loo sameeyay Automation
MimoWork waxay keentaa
Mustaqbalka Goynta Laser-ka
MimoWork waxay ku takhasustay naqshadaynta xalalka laysarka ee farsamaynta walxaha aan birta ahayn ee duurka xayeysiiska, baabuurta & duulista, moodada & dharka, daabacaadda dhijitaalka ah, warshadaha dharka shaandhada, iwm.
Waxaan bixinaa mashiinnada goynta laser-ka gaarka ah iyo kuwa gaarka ah ee noocyada kala duwan ee dalabaadka si kor loogu qaado hawlgalka iyo wax soo saarka macaamiisheena.
Gooyaha Laser Contour 160L
Habka ugu fudud ee goynta alaabta sublimation dheeha.
Ogaanshaha jaantus sax ah iyo goyn toosan oo toosan oo qaab iyo qaab kasta ah.
Waxtarka sare oo leh automotion sare oo loogu talagalay quudinta, sawir qaadista iyo goynta sagxadda.
Khabiirka Goynta Walxaha dabacsan.
Qallooc kasta ama kala bixitaan kasta waxaa aqoonsan kara Nidaamka Aqoonsiga Mimo Contour oo qaybo daabacan ayaa loo gooyn doonaa cabbirka saxda ah iyo qaabka saxda ah.
Naqshadaynta jirka oo si buuxda u xiran ayaa go'aamisa dammaanadda badbaadada ee jarida wax soo saarka
Lagu dhex daray xawaare sare, waxqabad la isku halayn karo, iyo astaamo u qalma, habayn dabacsanaan leh dalab kasta.
Mashiinka heerka gelitaanka ugu fiican ee qalabka adag ee qaab-weyn.
R&D oo loogu talagalay farsamaynta akril iyo alwaax.
Oggolow dejinta iyo rarista aan xadidnayn.
Xawaaraha sare iyo goynta saxda ah.
Doorashada aan la barbar dhigi karin ee goynta alaabta dabacsan.
Laba madax oo laser ah oo si madax-bannaan u socda, labanlaabaya waxtarkaaga (ikhtiyaar).
Software-ka Nesting wuxuu ku kaydiyaa agabkaaga heerka ugu sarreeya.
Si joogto ah u goynta quudinta tooska ah.
Gooyaha Laser-ka ah ee fidsan 250L
Ku habboon jarida dharka farsamada.
Shaqada xoogga leh waxay abuurtaa wax-qabad aan dhammaad lahayn.
Farsamada daabacaadda khad-jet-ka ee aan lala xidhiidhin (ikhtiyaar ah).
Cabbirka miiska shaqada ee weyn waa la beddeli karaa
Galvo Laser Engraver & Calaamadeeyaha 40
Ku habboon calaamadaynta ama dhunkashada gooynta qalabka aan birta ahayn sida filimka wareejinta kulaylka.
Diirada 3D firfircooni waxay jebisaa xadka walxaha.
Calaamadaynta laysarka ee duulaysa si loo dhiso khadka isu-ururinta (ikhtiyaar).
La talinta iibka ka hor waa muhiim si aad wax uga barato baahiyahaaga qaarkood.Midka kugu habboon ayaa ugu fiican!
Mashiinnada laser MimoWork waxay dabooshaa baahiyo kala duwan oo ka yimid meelo kala duwan.
Ikhtiyaarada laysarka dheeraadka ah iyo kuwa kala duwan ayaa diyaar u ah kala duwanaanshaha shuruudaha la habeeyey.
Adeegga MimoWork wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa hubinta hawlgal lagu kalsoonaan karo ee mashiinada laysarka si macaamiisheenu mar walba u dareemo mid gaar ah.
Kooxda Adeegga MimoWork waxay had iyo jeer ka dhigtaa baahida macaamiisheena inay ka sarreeyaan tooda laga soo bilaabo marxaladda tijaabada walxaha bilawga ah ilaa bilawga nidaamka laysarka.
Daawo Dhamaan Agabka
Muddo 20 sano ah, MimoWork waxay u heellan tahay inay riixdo
xadka tignoolajiyada laysarka leh ganacsi cusub
Eeg Dhammaan Codsiyada
Goynta Patch ee MimoWork
Dharka Layser-jeexa ee Dharkaaga Dharka ah ee Laydhka Goynta Laydhka Waxa loo isticmaali karaa ku dhawaad ​​wax kasta oo aad doonayso inaad aragto, oo ay ku jiraan jeansiinta, jaakadaha, funaanadaha, funaanadaha dhididka, kabaha, boorsooyinka dhabarka, iyo xataa daboolka telefoonka.Waxay...
Hal mar ku samee Laser PCB Graving
Hal mar ku samee Laser PCB Etching PCB, sidaha aasaasiga ah ee IC (Integrated Circuit), ayaa adeegsada raadadka qabanqaabada si ay u gaaraan isku xirka wareegga ee qaybaha elektiroonigga ah.Waa maxay sababta kaarka wareegga daabacan?kondho...
Maxaa ka dhigaya xaradhka laysarka inuu ka duwan yahay qalabka wax lagu qoro
Tallaabooyinka ilaalinta qaboojinta ee Nidaamka Laser CO2 xilliga Jiilaalka
Soo koobid: Maqaalkani wuxuu inta badan sharxayaa baahida loo qabo dayactirka mashiinka goynta laser-ka, mabaadi'da aasaasiga ah iyo hababka dayactirka, sida loo doorto barafka ka-hortagga mashiinka goynta laser, iyo arrimaha u baahan ...
Ku hel Tignoolajiyada Laser-ka ee MimoWork
ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato iftiinka casriga ah?
Markaa isdiiwaangeli warsidahayaga.
©Xuquuqda daabacaada - 2010-2021 : Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. , , , , , , ,